I-Brooklinen Inentengo Yokuthengiswa Kwamaphesenti angu-15 - Ekhaya
I-Brooklinen Inentengo Ejwayelekile Ye-15 Amaphesenti Ase-Sitewide
Brooklinen Is Having Rare 15 Percent Off Sitewide Sale
Ingabe ikamelo lakho lokulala lidinga ukuthuthukiswa okungathi sína? Kahle (izindaba ezinhle!), UBrooklinen ihlinzeka ngo-15% ohlangothini lwe-Spring Savings ukuthengiswa okuphela ngoJuni 23. Uma kubhekwa uhlobo lomkhiqizo oluthandwa kakhulu kuyaqabukela iyaqhubeka nokudayiswa, siphakamisa kakhulu ukuthi uzisebenzise ngokugcwele lezi ziphulelo kanye nesitoko on on amashidi , abaduduzi , amathawula , izingubo futhi ngisho imicamelo ukuvuselela ikhabethe lakho lelineni nokusetha izindlu zangasese nezokulala. Ukuphela kokufanele ukwenze ukufaka izinto zakho ozithandayo enqoleni (ngaphandle kwe- Izikhala ) futhi isaphulelo sizosetshenziswa ngokuzenzakalela ekuphumeni, ayikho ikhodi edingekayo.
Lapha, wonke amalineni amahle nezinto ezinhle esibheke kuzo.
izincwadi ezimnandi okufanele uzifunde
OKUSHIWO: Izinto ezi-5 Njalo iPatio zidinga ukubukeka zimnandi, ngokusho kweHGTV Star
1. Super-Plush ithawula Move-In Inqwaba
Isethi ifaka amathawula ayisithupha (okugeza okune, izandla ezimbili), izindwangu zokuwasha ezine ne-bathmat, okwenza ikulungele ukuthutha okusha (noma i-restock yakho yonyaka nje).
Ithenge ($ 199; $ 169)
2. I-Luxe Core Sheet Set
Awukwazi ukungahambi kahle ngalawa mashidi akudala enzelwe ngokukhethekile ukukugcina upholile futhi angomunye wabathengisi abaphelele kakhulu be-Brooklinen. Ngiwubuthongo obushisayo futhi lawa mashidi aphelele, afunda ukubuyekeza okukodwa. FYI, singaqinisekisa ukuthi kunjalo ngempela ithambile.
Ithenge ($ 175; $ 149 yeNdlovukazi Usayizi)
3. Phansi Umcamelo
Lona ngumcamelo waseBrooklinen othengisa kakhulu, osekela kakhulu. Inesakhiwo esimbaxa-mbili, esiqukethe ungqimba lwangaphakathi lwezimpaphe oluzungezwe amaqoqo aphansi. Sincoma kakhulu ukuthi uthenge ezimbili, ngoba umlingani wakho ngokungangabazeki uzokweba eyakho.
Ithenge ($ 69;$ 59)
4. Ingubo yelineni
Le ngubo ethokomele inhle kakhulu ebusika obufudumele basehlobo. Yenziwe ngefilakisi yaseBelgian naseFrance futhi isebenza ngokulinganayo nengubo yokuphumula kwezemidlalo ezungeze indlu njengoba kwenza ukoma ngemuva kokucwilisa okuphezulu kubhavu.
Ithenge ($ 148;$ 126)
5. Umduduzi Phansi
Khetha phakathi kwezisindo ezintathu (engasindi, isizini yonke kanye nokushisa okufudumele) ukuthola umduduzi wakho weGoldilocks ozwelayo ushizi kwesokudla. Ngayinye iza yakhelwe nge-fluff esatshalaliswe ngokulinganayo namaluphu ekhava yakho ye-duvet, ngakho-ke akudingeki ukuthi ulungise… futhi.
Ithenge ($ 259;$ 220 weNdlovukazi Usayizi)
6. Ikhava ye-Luxe Duvet
Indlela elula yokuvuselela ikamelo lakho, izandla phansi, ukuthola ikhava entsha yeduvet. Futhi kukhona umbala noma iphethini ezosebenza ngokuhlobisa kwakho, kusuka kokuphinki okuthambile kuya ekuphrintweni okwenziwe ngomkhawulo we-topography, kanye nomnyama, i-navy nakho konke okuphakathi.
YITHENGE ($ 155;$ 132)
7.Umbhede Wombhede Omncane
Ngoba abantu abadala akufanele babe nayo yonke injabulo (noma yonke imali). Le Setha Yombhede Wengane enezicucu ezintathu iza nesikhwama semicamelo esiphrintiwe ngokudlidlizelayo, ikhava ye-duvet kanye nephepha lokulala - ngaphezu kokufakwa komduduzi nomcamelo. Nakhu ngithemba ukuthi kusho ukuthi bazolala ubusuku bonke ... noma okungenani kuze kube ngu-7 AM.
YITHENGE ($ 188;$ 160)
8. Kamalibhele Usilika Inqwaba
Le sethi yamasilowuthi amabili kasilika (ngobukhulu obujwayelekile noma benkosi) kanye nomaskhi wamehlo kasilika ofanayo kuzokwenza isipho esihle kakhulu ngoSuku Lomama ... noma isipho ngokwakho. Ngoba nina nobabili nifanelwe ukwelashwa ngemuva kobunzima bonyaka odlule. (PS, kukhona nemibala eqinile emihle eyisithupha ongakhetha kuyo, ngaphezu kwalokhu kuphrinta okugcwele izinkanyezi.)
Ithenge ($ 79;$ 67)
9. I-Linen Core Sheet Set
Uma ubulokhu ucabanga ngokukhipha isethi yamashidi welineni okupholisa, manje isikhathi sokugcina ukuzibophezela. Zithambile kamnandi futhi zenziwe ngazo Kuqinisekiswe i-Oeko-Tex Ifulegi laseBelgian neFrance, okubenza babe inketho enobungani futhi.
Ithenge ($ 269;$ 229 yeNdlovukazi Usayizi)
10. Phansi Komantilasi Topper
Uma ubulinde isibonakaliso sokudonsa i-trigger ku-topper entsha, yilokhu. Uhlobo lukaBrooklinen lufaka ikesi likakotini elingamaphesenti ayi-100 eligxishwe idada elimhlophe phansi ekwakhiweni kwebhokisi elixakile, ukuphefumula nokuzizwa okufana nefu okungeke kube isicaba njengepancake ngemuva kwezinyanga ezimbalwa nje.
YITHENGE ($ 349;$ 297)
11. Phonsa Ingubo
Le ngubo yesitayela ayishodi ngekhwalithi. Awusikholwa? Vele ubuze leli khasimende, elihlabe umxhwele ngokuzizwa okuthambile ekubukezeni, ekubhaleni, Ukuthandana nalo okwesibili engikuthintile.
Ithenge ($ 189;$ 161)
12. Isigaxa Samathawula Waffle Bath
Lesi sethi esinezicucu ezinhlanu siphuma namathawula amabili wezandla, amathawula amabili okugeza kanye nokhuni lokugeza, konke okwenziwe ngokotini osindayo waseTurkey omisa ngokushesha okukhulu futhi uthambe ngendlela eyisimanga.
Ithenge ($ 105;$ 89)
13. Isethi Ebunjiwe Yeshidi LamaCashmere
Uncamela ukusnuza kokunye okunethezeka kakhulu kunamashidi kakotini? Le ndwangu ye-cashmere enezindlebe izwakala njengegolide. Ngokuzimisela, ithambile kakhulu, iyaphefumula ngokumangazayo futhi yebo, kusengakwazi ukugeza umshini.
YITHENGE ($ 279; $ 237 ngobukhulu beNdlovukazi)
14. Umduduzi Onesisindo
Yup, lo mduduzi muhle nje futhi upholile njengalo lonke uhlu lukaBrooklinen — umane nje ungeza amakhilogremu angu-15, 20, 25 noma ama-35 wesisindo esisindisayo. Ifaka ngisho izihibe zekhoneni, ngakho-ke ungakuphatha lokhu njengoba ubungenza noma iyiphi enye i-duvet.
YITHENGE ($ 349; $ 297 ngama-20 lb. Usayizi weNdlovukazi)
15. I-Super-Plush Robe
Le ngubo kakotini yaseTurkey izoguqula ishawa sakho esimaphakathi sibe yinto efana ne-spa. Njengoba omunye umbuyekezi akubeka, ngivuka bese ngiyiphonsa ngokushesha. Ukutshalwa kwezimali okwesabekayo.
Ithenge ($ 98; $ 83)
imibono yezithombe ekhaya
OKUSHIWO: Ungamugeza Kanjani Umduduzi (Ngoba Uyayidinga Ngempela)
Ufuna amadili amahle kakhulu nokweba kuthunyelwe ngqo ebhokisini lakho lokungenayo? Chofoza lapha .
bukela abangani besizini 1 ku-inthanethi amafilimu
indlela engcono kakhulu yokukhula kwezinwele
kanjani ukuqeda izinwele ukuwa dandruff
amagama we-yoga asanas nezinzuzo
Amathrendi ombala wezinwele we-2016
ama-movie wezindaba ezinhle zothando we-hollywood
emilia clarke isoka cory michael smith